ဗြိတိန်နှင့် Golden Visa အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခွင့်
ကျွန်ုပ်တို့သည်ယူကေတွင်စီးပွားရေးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး ၀ န်ဆောင်မှုကိုပေးသည်။
အကောင်းဆုံး ယူကေရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency အတွက်ကိုယ်စားလှယ်များ နှင့်ရှေ့နေများ ယူကေတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်နေထိုင်ခြင်းနှင့်အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်များအတွက်ပွဲစားများဗြိတိန်ရှိ Residency အစီအစဉ်များသည်ဖောက်သည်များ၏ကာကွယ်မှုအတွက်တွဲဖက်လုပ်ဆောင်သည်။
ဗြိတိန်နိုင်ငံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုယ်စားလှယ်များဖြင့်နေထိုင်ခြင်းသည်ယူကေတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခွင့်အတွက် ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ ယူကေတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များမှနေထိုင်ခြင်း၊ ယူကေတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ဖြင့်နေထိုင်ခြင်း၊ ယူကေတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်ဒုတိယအနေဖြင့်နေထိုင်ခြင်း၊ , ယူကေတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်အမြဲတမ်းနေထိုင်ခွင့်၊ ယူကေတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်ယာယီနေထိုင်ခြင်း၊ ယူကေတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ဖြင့်နေထိုင်ခြင်း၊ ယူကေရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များမှနေထိုင်ခြင်း၊ ယူကေတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်နိုင်ငံသား၊ ဗြိတိန်တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု၊ ဗြိတိန်တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု၊ ဗြိတိန်တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်းနှင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု၊ ဗြိတိန်တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်းနှင့်နိုင်ငံသားဖြစ်ခြင်း၊ ဗြိတိန်နိုင်ငံရှိစီးပွားရေးနိုင်ငံသားအစီအစဉ်များ၊ ဗြိတိန်နိုင်ငံတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်ခြင်း၊ ယူကေရှိနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ ယူကေတွင်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ ယူကေရှိဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ ယူကေတွင်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ နေထိုင်ခွင့်နှင့်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ် i ဗြိတိန်နိုင်ငံရှိသံတမန်ရေးအရဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ ယူကေတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပြုလုပ်သောဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ ယူကေတွင်နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ ယူကေရှိဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်အစီအစဉ်၊ ယူကေရှိဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်အစီအစဉ်၊ ယူကေရှိရွှေဗီဇာ၊ ယူကေရှိရွှေဗီဇာ၊ ယူကေရှိရွှေဗီဇာအစီအစဉ်များ၊ ယူကေရှိရွှေဗီဇာအစီအစဉ်၊ ယူကေတွင်ဒုတိယမြောက်ရွှေဗီဇာ၊ ဗြိတိန်တွင်ဒုတိယမြောက်ဗီဇာအစီအစဉ်၊ ဗြိတိန်တွင်ရွှေဗီဇာ၊ ဗြိတိန်နိုင်ငံသားနှင့်ဗီဇာ၊ နေထိုင်ခွင့်နှင့်ဗြိတိန်ရှိရွှေဗီဇာဗြိတိန်ရှိရွှေဗီဇာနိုင်ငံသား၊ ယူကေရှိရွှေဗီဇာအစီအစဉ် ယူကေရှိရွှေဗီဇာအစီအစဉ်များ
နောက်ထပ်အထောက်အပံ့ဖြင့်ယူကေတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်သင်၏ Residency အားလုံးအတွက်“ 1 stop solutions” ။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency အတွက်ယူကေသို့အနည်းဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု - GBP 50,000
ဂရိတ်ဗြိတိန် (အင်္ဂလန်၊ ဝေလနယ်နှင့်စကော့တလန်) နှင့်မြောက်အိုင်ယာလန်တို့ပါဝင်သောယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းသည်နယူးယောက်ပြည်နယ်ထက်နှစ်ဆရှိသည်။ ဗြိတိသျှကျွန်း၏အရှေ့တောင်ပိုင်းတွင်ရှိသောဗြိတိန်နိုင်ငံသည်မြောက်ပိုင်းရှိစကော့တလန်မှရှီဗီယိုတောင်တန်းများမှကျောက်တုံးများဖြင့်သီးခြားစီရှိသည်။ သူတို့ထံမှ Pennine ကုန်းမြင့်ကွင်းဆက်သည်တောင်ဘက်တွင်အင်္ဂလန်၏ focal point မှ ဖြတ်၍ အနောက်မြောက်ဘက်ရှိ Lake District ရှိအမြင့်ဆုံးနေရာသို့ရောက်ရှိသည်။ အနောက်ဘက်တွင်မတ်စောက်သောတောင်စောင်းများနှင့်ချိုင့်ဝှမ်းများဟုလူသိများသောနေရာတစ်ခုဖြစ်သောဝေးလ်စ်၏အစွန်အဖျားတစ်လျှောက်ရှိကန်ဘီးယန်းတောင်တန်းများရှိပြီးကော့စ်ဝှမ်းစ်၊
မြောက်ပင်လယ်သို့စီးဝင်သောသိသာထင်ရှားသောရေလမ်းကြောင်းများမှာသိမ်းစ်၊ အနောက်ဘက်တွင် Severn နှင့် Wye တို့ရှိပြီး Bristol Channel သို့ ဖြတ်၍ သွားလာနိုင်သော Mersey နှင့် Ribble နှင့်ဆင်တူသည်။
၎င်း၏ထူးခြားသောနိုင်ငံများ၊ ဒေသများ၊ လူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ချင်းနှင့်ဘဝပုံစံများကိုနားလည်ခြင်းသည်တစ်သက်တာကြာနိုင်သည်။ သို့သော်ယခင်လုပ်ဆောင်ချက်မလုပ်ခင်သိထားသင့်သောအချက်များရှိသည်။
တ ဦး တည်းဘုံ, များစွာသောနိုင်ငံများ
ယူကေတွင်အင်္ဂလန်၊ စကော့တလန်၊ ဝေလနယ်နှင့်မြောက်အိုင်ယာလန်တို့ပါဝင်သည်။ တစ်ခုချင်းစီတွင်ကိုယ်ပိုင်ယဉ်ကျေးမှုနှင့်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးရှိကြသည်။
နိုင်ငံတိုင်းရှိခရိုင်နှင့်မြို့ပြအသိုင်းအဝိုင်းများသည်လည်းသူတို့၏ကိုယ်ပိုင်စရိုက်များရှိသည်။ ဥပမာအားဖြင့်အင်္ဂလန်မြောက်ပိုင်းမှပုဂ္ဂိုလ်များသည်တောင်ပိုင်းမှလူများထက်ရိုးရှင်းသော၊ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းရှိသည်ဟုမကြာခဏဆိုလေ့ရှိသည်။ ဤကျော်ကြားမှုများသည်သင်မည်မျှထိုက်တန်သော်လည်းအထူးသဖြင့်သင်နှင့်တွေ့ဆုံသူများအပေါ်တွင်မှီခိုလိမ့်မည်။
ယူကေသည်အလွန်ယဉ်ကျေးမှုပေါင်းစုံသောနိုင်ငံဖြစ်ပြီးယုံကြည်မှုများနှင့်လူ့အဖွဲ့အစည်းများအားလုံးကိုအကြီးအကျယ်လေးစားသည်။ လူမျိုး၊ လိင်၊ လိင်လမ်းကြောင်း၊ အသက်၊ နိုင်ငံခြားသားများစွာသည်ဗြိတိန်နိုင်ငံသို့ ၀ င်ရောက်လာခြင်းမှာအမျိုးမျိုးသောကြောင့်၎င်းသည်နေထိုင်ရန်ဖိတ်ခေါ်ခြင်းနှင့်ရင်းနှီးဖော်ရွေသည့်နေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဗြိတိသျှအများစုမှဝေမျှထားသောအခြေခံလက္ခဏာအချို့ရှိသည်။ ၎င်းတို့သည်သူတို့၏ကိုင်တွယ်မှုအတွက်ချီးကျူးခံရသည်၊ အလွန်ကောင်းမွန်သောခံစားမှုများကိုတင်ပြလိုခြင်းနှင့်သူတို့၏လုံခြုံရေးအတွက်မထိုက်တန်ပါ။ ဤအရာသည်အစမှ စ၍ သူတို့ရဲ့သူတို့ဟာ“ အအေး” (သို့) စိတ်မ ၀ င်စားသူဟုခံစားရစေရန်အနည်းငယ်ခဲယဉ်းပါတယ်။ ၎င်းသည်ပွင့်လင်းသောယာဉ်များနှင့် ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးမှုကိုကန့်သတ်ထားနိုင်သော်လည်း၊ ဗြိတိန်လူမျိုးများသည်အခြားလူများကဲ့သို့ပင်နွေးထွေးပြီးစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသည်ကိုမကြာမီသင်တွေ့လိမ့်မည်။
အမှန်စင်စစ်ဟာသသည်ဗြိတိန်လူမျိုးများအတွက်အလွန်အရေးကြီးသည်၊ ဖြစ်နိုင်သည်မှာသူတို့၏ကြောက်ရွံ့မှုကင်းမဲ့မှုနှင့်အတူ၎င်းတို့၏ထုတ်ဖော်ပြောဆိုမှုများကိုမရောထွေးပါစေနှင့်။ ၎င်းတို့သည်ထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းနှင့်ကောင်းမွန်သောအလေ့အထများကိုလေးစားတန်ဖိုးထားခြင်း၊
ဗြိတိန်နိုင်ငံသားတွေနဲ့စကားပြောတဲ့အခါအမှန်တကယ်ဇာတ်လမ်းကိုဘယ်လိုပုံဖေါ်ရမယ်ဆိုတာအရင်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သူဟောင်းများကရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။ အချို့သည်ပြစ်မှုဖြစ်စေသောအန္တရာယ်ထက်မရှင်းလင်းသောတုံ့ပြန်မှုကိုပေးလိုကြသည်။ ထို့ကြောင့်သူတို့၏ထင်မြင်ချက်ကိုသိရှိရန်သတိထားနားထောင်ရန်လိုအပ်နိုင်သည်။ ဖြစ်နိုင်သည်မှာဗြိတိန်လူမျိုးများသည်ပေါ့ပေါ့တန်တန်စားသောက်ခြင်းကိုအလွန်နှစ်သက်ကြသောကြောင့်ဖြစ်သည်၊ အထူးသဖြင့်ရာသီဥတုနှင့် ပတ်သက်၍
၎င်းသည်မှေးမှိန်နေခြင်း၊ တောက်ပနေခြင်းနှင့်အေးဆေးခြင်းတို့ကြောင့်နာမည်ဆိုးဖြင့်ကျော်ကြားခဲ့သော်လည်းလက်တွေ့တွင်ဗြိတိန်နိုင်ငံသည်ရာသီဥတုအမျိုးမျိုးနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောရာသီဥတုကိုဖော်ညွှန်းထားသည်။ ရှည်လျားသောယေဘုယျအားဖြင့်အေးမြသောဆောင်းရာသီများသည်ပိုမိုပူပြင်းသည့်လေထုများမှကျွမ်းကျင်သူများအတွက်စမ်းသပ်မှုတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။ အမှန်မှာနွေရာသီ၏အမြင့်တွင်ပင်မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းသည့်အခွင့်အလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဂျီဒီပီ၏ခန့်မှန်းတွက်ချက်မှုအရယူကေသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်ပဉ္စမအကြီးမားဆုံးစီးပွားရေးဖြစ်သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်မြင့်မားသောလုပ်ခများနှင့်လျောက်ပတ်သောဘဝပုံစံများဖြင့်ဟောင်းနွမ်းသောဟောင်းနွမ်းမှုများကိုတိုင်းပြည်သို့ဆွဲဆောင်နိုင်ခဲ့သည်။ သို့သျောလညျး, ဤ Focal Points သည်၎င်း၏ဒေသများနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုလုံးကိုကျော်ညီတူညီမျှဖြန့်ဝေကြသည်မဟုတ်။
အုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ငန်းများ - ဥပမာ - ဘဏ်လုပ်ငန်းနှင့်အကာအကွယ် - သည်နှစ်ပေါင်းများစွာအတွင်းတိုးတက်များပြားလာပြီးသမားရိုးကျစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ - ဥပမာ - ထုတ်လုပ်ခြင်း - ကျဆင်းလာသည်။ ၎င်းသည်ဗြိတိသျှစီးပွားရေးတွင်ရာထူး ၁၀၀၀,၀၀၀ ကျော်ကိုကိုယ်စားပြုသောကြောင့်လန်ဒန်နှင့်အရှေ့တောင်ဘက်ရှိငွေကြေးစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့များကဤနယ်မြေများပေါက်ကွဲမှုကိုဆိုလိုသည်။ ကွဲပြားခြားနားသောဒေသများယေဘုယျအားဖြင့်အလားတူငွေကြေးဆိုင်ရာအားသာချက်များခံစားခဲ့ရကြပြီမဟုတ်။
နိုင်ငံခြားသားများသည်သာယာဝပြောသောဒေသများရှိလုပ်ခပိုမိုမြင့်မားမှုကိုရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်သည်။ သို့သော်သူတို့သည်အလားတူစွာနေထိုင်ခြင်းအတွက်ကုန်ကျစရိတ်ပိုမိုများပြားစွာဖြင့်တိုက်ပွဲဝင်ရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။ ဗြိတိန်၏areasရိယာများသည်၎င်းတို့၏စီးပွားရေးကိုဟန်ချက်ညီစေရန်လုပ်ဆောင်ခြင်းနှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးရှိလေးနက်သောမြို့ပြofရိယာများကိုပြသရန်ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းအားဖြင့်ပိုမိုရှုပ်ထွေးသောဟောင်းနွမ်းသောမြို့ပြများကိုမြို့တော်ပြင်ပတွင်သာလွန်ကောင်းမွန်သောဘဝပုံစံဖြင့်လျော်ကြေးပေးနိုင်သည်။
ဗြိတိန်အများစုသည်ကာလရှည်အလုပ်လုပ်ကြသည်။ အပေါင်းအသင်းများကသူတို့၏အလုပ်ကိုသူတို့အိမ်သို့ညအိပ်ရက်သတ္တပတ်များကုန်ဆုံးချိန်တွင်တွေ့ရခြင်းသည်ပုံမှန်ဖြစ်သည်။ စာအဆက်အသွယ်အသစ်တီထွင်မှုအသစ်များပေါ်ထွက်လာခြင်းနှင့်အတူယခင် pats အချို့သည်သူတို့၏သူဌေးနှင့်တသမတ်တည်းထိတွေ့ဆက်ဆံရန်အားကိုးရသည်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်သည်။ အကျိုးအမြတ်များအပေါ်မည်သို့အကျိုးသက်ရောက်ပုံနှင့် ပတ်သက်၍ ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောဆွေးနွေးမှုများသည်မြောက်မြားစွာသောအဖွဲ့အစည်းများအား၎င်းတို့၏ ၀ န်ထမ်းများထက်သာလွန်ကောင်းမွန်သောအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများရရှိစေရန်လှုံ့ဆော်ပေးခဲ့သည်။
အချိန်ကြာမြင့်စွာကြာသောကာလ၏ဓလေ့ထုံးစံနှင့်ခက်ခဲသောအလုပ်များသည်ဗြိတိန်တွင်အခြေခံသော်လည်းအလုပ်သမားများသည်ခွဲခြားခြင်းနှင့်အကြောင်းပြချက်ကင်းမဲ့သောတရား ၀ င်အခွင့်အရေးများမှကင်းလွတ်ခွင့်မှအကာအကွယ်ပေးထားသည်။ များစွာသောအဖွဲ့အစည်းများသည်အစိုးရ၏မိဘအုပ်ထိန်းမှုခွင့်၊ မိခင် / ဖခင်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်ကလေးစောင့်ရှောက်ရေးစရိတ်များဖြင့်ကူညီသောသူတို့၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့်မိသားစုကိုညှိနှိုင်းရန်သူတို့၏ကိုယ်စားလှယ်များအားကူညီရန်ကြိုးစားသည်။ ယူကေတွင်ကွဲပြားခြားနားသောယဉ်ကျေးမှုပေါင်းစုံလုပ်သားအင်အားရှိသည်။
ယူကေအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency အတွက်အခြေခံအသေးစိတ်များ
အတွက်အပိုဆောင်းအခကြေးငွေများ အတွက်ရွှေဗီဇာ UK
Tier-1 ဆန်းသစ်တီထွင်သူ / လုပ်ငန်းရှင်ဗီဇာ & Tier-1 ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဗီဇာ
ယူကေ၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency အတွက်အချိန်ထုတ်ယူခြင်း
UK TR နှင့်ငါးနှစ်အကြာတွင် PR အတွက်တစ်နှစ်လျှင် ၉ လနေထိုင်ရမည်။
ILR အဆင့်အတန်းနှင့်အတူစုစုပေါင်း6နှစ်ပြီးနောက်
ယူကေစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတွင်စတင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်£ 50,000 Tier-1 တီထွင်သူ / စွန့် ဦး တီထွင်ဗီဇာ
ယူကေအစိုးရငွေချေးစာချုပ်များတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းသို့မဟုတ်ဗြိတိန်ကုမ္ပဏီများမှအစုရှယ်ယာများမှတဆင့်£ 2,000,000 Tier-1 ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဗီဇာ။ အိမ်ခြံမြေဝယ်ယူခွင့်မပြုပါ
အဘယ်ကြောင့်ဗြိတိန်၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် Residency ဘို့သွားရ
ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အင်အားအကြီးဆုံးနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ယဉ်ကျေးမှုပေါင်းစုံသောလူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည်၊ ကမ္ဘာပေါ်တွင်အကောင်းဆုံးအခမဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုဝန်ဆောင်မှုများ၊ အဆင့်မြင့်ပညာရေးအခွင့်အလမ်းများနှင့်ထူးခြားသောဘဏ္financeာရေးကဏ္ considered ဖြစ်သည်။ ဗြိတိန်နိုင်ငံ၏ရွှေနေထိုင်ခွင့်အစီအစဉ်သည် G1 နိုင်ငံများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အမြန်ဆုံးလုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်သည်။ များသောအားဖြင့်ခွင့်ပြုချက်ကို ၆-၈ လအတွင်းထုတ်ပေးသည်။ ဤဖြစ်စဉ်ကိုမျှော်လင့်ထားသည့်ရလာဒ်ကိုအတည်ပြုသည့်ပွင့်လင်းမြင်သာသောစံနှုန်းများဖြင့်လည်းစဉ်းစားသည်။ ထို့အပြင်နေထိုင်မှုမဟုတ်သောနေထိုင်သူအဆင့်သည်မြင့်မားသောအသားတင်ပိုင်ဆိုင်မှုများအတွက်အခွန်စည်းကြပ်သည့်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုပေးသည်။ လျှောက်ထားသူနှင့် ၄ င်းတို့၏မိသားစု ၀ င်များသည်ခွင့်ပြုချက်ရရှိပြီးသည့်အချိန်မှ ၅၀% ထက်မနည်းသောတိုင်းပြည်တွင်နေထိုင်ရမည်။
နေထိုင်ခွင့်လျှောက်လွှာတွင်သင်၏အိမ်ထောင်ဖက်၊ ၁၈ နှစ်အောက်ကလေးများနှင့် ၁၈ နှစ်အထက်ငွေကြေးဆိုင်ရာမှီခိုသောကလေးများပါဝင်နိုင်သည်။ နေထိုင်ခွင့်လက်မှတ်ရရှိပြီးနောက်လျှောက်ထားသူအားလုံးသည်ဗြိတိန်တွင်နေထိုင်ရမည်ဖြစ်ပြီးမိဘနှစ် ဦး စလုံး၏ခွင့်ပြုချက်သာလျှင်ကလေးများ၏နေထိုင်ခွင့်လက်မှတ်ကိုသာခွင့်ပြုလိမ့်မည်။
Residency UK ရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်အားဖြင့် insite
ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းကိုသင်၏အဓိကအိမ်အဖြစ်လည်းလုပ်ရမည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်တစ်နှစ်လျှင်ရက်ပေါင်း ၁၈၀ ကျော်ကိုဗြိတိန်နိုင်ငံပြင်ပ၌နေထိုင်ရန်မစွမ်းနိုင်ပါ။ ဒီနေရာမှာစီးပွားရေးစီမံခန့်ခွဲမှုအတွေ့အကြုံ (သို့) အင်္ဂလိပ်စွမ်းရည်ကိုသက်သေပြရန်မလိုအပ်ပါ။
သင်ပထမ ဦး ဆုံး Tier 1 ဗီဇာကိုလ ၄၀ ကြာသင်ရရှိပြီးသုံးလအတွင်းရွေးချယ်ထားသည့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုပြုလုပ်ရမည်။ အကယ်၍ သင်သည်သင်၏နေထိုင်မှုတစ်လျှောက်လုံးတွင်ဆက်လက်တောင်းခံနေပါကနေထိုင်မှုခွင့်ပြုချက်သည် ၄၀ လကန ဦး ကာလပြီးဆုံးပြီးနောက်နှစ်နှစ်သက်တမ်းတိုးလိမ့်မည်။
ငါးနှစ်ကြာပြီးနောက်သင်အမြဲတမ်းနေထိုင်သူဖြစ်လိမ့်မည်။ ဤအဆင့်အတန်းအတွက်သင်အင်္ဂလိပ်၊ ဝလေသို့မဟုတ်စကော့တီးလ်ဘာသာစကား၏ဗဟုသုတနှင့်ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း၏ဘဝနှင့်ယဉ်ကျေးမှုတို့နှင့်အကျွမ်းတဝင်ရှိကြောင်းသက်သေပြရမည်။ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းနိုင်ငံသားဖြစ်ရန်လျှောက်ထားရန်အခွင့်အလမ်းရလိမ့်မည်။
ယာယီနေထိုင်ခွင့်ကိုငါးနှစ်ရရှိပြီးနောက်အမြဲတမ်းနေထိုင်ခွင့်အတွက်လျှောက်ထားသူများသည် GBP ၂ သန်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံရမည်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၏ ၇၅ ရာခိုင်နှုန်းသည်အစိုးရငွေချေးစာချုပ်များသို့မဟုတ်စီးပွားရေးရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုပုံစံဖြစ်ရမည်။ ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းကိုပိုင်ဆိုင်မှုများ ၀ ယ်ခြင်းသို့မဟုတ်ဘဏ်အပ်နှံခြင်းအတွက်သုံးစွဲရမည်။
သင်အမြဲတမ်းအမြဲတမ်းနေထိုင်ခွင့်ရလိုလျှင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပမာဏကိုမြှင့်တင်ရမည်။ GBP ၅ သန်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံပါ။ သင်သည်သုံးနှစ်တာကာလအတွင်းအမြဲတမ်းနေထိုင်သူဖြစ်လာလိမ့်မည်။ GBP ၁၀ သန်းအတွက်အမြဲတမ်းနေထိုင်ရန်အချိန်မှာ ၂ နှစ်သာဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အဓိကလျှောက်ထားသူနှင့်သာသက်ဆိုင်သည်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသုံးမျိုးစလုံးအောက်တွင်ငါးနှစ်အကြာတွင်သူသည်အမြဲတမ်းနေထိုင်ခွင့်ရှိသည်။
ယူကေအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency အတွက် ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူ
ကျွန်ုပ်တို့၏အသင်း နေထိုင်ခွင့် ဗြိတိန်အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုယ်စားလှယ်များကသည် နှင့် နေထိုင်ခွင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် ရှေ့နေများ ယူကေအတွက် ဗြိတိန်မှဖောက်သည်များနှင့်၎င်းတို့၏မိသားစုများကိုဗြိတိန်နိုင်ငံမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားအဖြစ်ထောက်ခံမှု၊ ဗြိတိန်နိုင်ငံမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်အခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအခွင့်အလမ်းများကိုနိုင်ငံ ၃၇ နိုင်ငံမှပံ့ပိုးပေးသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုများသည်ဗြိတိန်မှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ ဗြိတိန်မှ Golden Visa သို့မဟုတ်ဗြိတိန်နိုင်ငံမှဖြစ်စေနိုင်ငံကူးလက်မှတ်သို့မဟုတ်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ဖြင့်နိုင်ငံသားအဖြစ်ကန့်သတ်ထားသည်သာမကဗြိတိန်နိုင်ငံ၏အကောင်းဆုံးအိမ်ခြံမြေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအခွင့်အလမ်းများကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့ကူညီသည်။ ယူကေသို့မဟုတ်ကမ်းလွန်၊ ယူကေရှိလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များနှင့်ငွေရေးကြေးရေးစီမံကိန်းများပါဝင်သည်။
ကျနော်တို့တတ်နိုင်သည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုန်ဆောင်မှုများကနေထိုင်ရာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့တတ်နိုင်မှတဆင့်ဗြိတိန်နိုင်ငံအဘို့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေကုမ္ပဏီ ယူကေအတွက်တတ်နိုင်သောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေများ၊ ယူကေအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံများကတတ်နိုင်သောနေထိုင်ခွင့်၊
ယူကေမှ ၃၇ နိုင်ငံသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခွင့်။
ဗြိတိန်နိုင်ငံရှိ ၃၇ နိုင်ငံသို့ရွှေဗီဇာ။
နိုင်ငံသားဖြစ်မှုသည်ဗြိတိန်နိုင်ငံမှနိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ယူကေမှနိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်။
ယူကေမှစီးပွားရေး ၁၀၆ နိုင်ငံသို့စီးပွားရေးအခြေပြုလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး။
ယူကေတွင် ၃၇ နိုင်ငံမှရွှေဗီဇာအစီအစဉ်များ။
ဗြိတိန်နိုင်ငံမှနိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု။
ဗြိတိန်မှနိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်အစီအစဉ်များ။
ဗြိတိန်မှနိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံသို့စီးပွားရေးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအစီအစဉ်များ။
ဗြိတိန်နိုင်ငံရှိအိမ်ခြံမြေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကို ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူများအနေဖြင့်ဗြိတိန်နိုင်ငံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများအပေါ်ပြန်လည်အမြတ်အစွန်းရရှိသင့်သည်ဟူသောရှုထောင့်နှင့်အညီပံ့ပိုးမှုများပေးခဲ့သည်။ ကောင်းမွန်သောစံချိန်စံညွှန်းများရှိပြီးသူတို့၏အိမ်ခြံမြေသည်ယူကေရှိကောင်းသောနေရာများတွင်တည်ရှိပြီးအကောင်းဆုံးအမြတ်အစွန်းများရရှိသော UK ရှိအကောင်းဆုံးအိမ်ခြံမြေဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီအနည်းငယ်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့အကြားဆက်သွယ်မှုရှိသည်။
သိရန်လိုအပ်သည် - ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် UK Residency
ဗြိတိန်နိုင်ငံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာရှေ့နေမှ Residency သည်သင်၏အောင်မြင်သောနေထိုင်မှုအတွက် UK သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်အသေးစိတ်စာရွက်စာတမ်းအထောက်အပံ့များကိုပေးလိမ့်မည်။ ယူကေသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏စံဝန်ဆောင်မှုများတွင် -
မည်သည့်အကြံပြုချက်များကို အခြေခံ၍ ဗြိတိန်မှသို့မဟုတ်ဗြိတိန်သို့ပြောင်းရွှေ့ရန်သင့်လိုအပ်ချက်များကိုကျွန်ုပ်တို့၏ရှေ့နေများကနားလည်လိမ့်မည်
ကျွန်ုပ်တို့သည် Residency ကိုဗြိတိန်နိုင်ငံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့်ဗြိတိန်နိုင်ငံရှိ Residence Permit ရယူရန်နှင့်ငြင်းဆန်မှုအန္တရာယ်ကိုလျှော့ချရန်အကြံပြုခြင်းမပြုမီအစီရင်ခံစာကိုပြင်ဆင်ရန်ကန ဦး Due Diligence ကိုပြုလုပ်သည်။
UK အတွက်လုံ့လဝီရိယရှိရှိလေ့လာခြင်းအစီရင်ခံစာအပေါ် အခြေခံ၍ ပိုမိုကောင်းမွန်သောအောင်မြင်မှုအတွက်အခြားအစီအစဉ်များကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုပါသည်။
ယူကေအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလျှောက်ထားခြင်းဖြင့်သင်၏ Residency နှင့်အတူရှေ့သို့လျှောက်လှမ်းနိုင်ရန်အတွက် client နှင့်မိသားစု ၀ င်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်များကိုစစ်ဆေးရန်လိုအပ်သည်။
ဗြိတိန်နိုင်ငံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလျှောက်လွှာများဖြင့် Residency စာရွက်စာတမ်းများဘာသာပြန်ခြင်းနှင့်အယူဝါဒ။ Residency အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏အထူးရှေ့နေများသည်ယူကေအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းနှင့်ရွှေဗီဇာများကိုပုံစံများနှင့်စာရွက်စာတမ်းများဖြည့်ရန်ကူညီလိမ့်မည်။
သင်နှင့်သင်၏မိသားစုသည်ယူကေအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလျှောက်ထားခြင်းဖြင့် Residency အတွက်မှတ်တမ်းများကိုအဆင်သင့်ဖြစ်ပြီးပါက၎င်းကိုသက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်များနှင့်ကျွန်ုပ်တို့ဖြည့်ပါလိမ့်မည်။
ဗြိတိန်နိုင်ငံမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency လျှောက်လွှာကိုအတည်ပြုပြီးသည်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်သတင်းကောင်းကိုသင်နှင့်အခြားအထောက်အပံ့များအတွက်စတင်ပြင်ဆင်နေသည်။
အောက်ဖော်ပြပါပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်ဗြိတိန်ရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအား UK သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၀ န်ဆောင်မှုများဖြင့် Residency ကိုကျွန်ုပ်တို့ထောက်ပံ့ခြင်းသို့မဟုတ်ထောက်ပံ့ခြင်းမပြုပါ။
နေထိုင်ခွင့် ဗြိတိန်အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုန်ဆောင်မှုများက ကုန်သည်များသို့မဟုတ်ဗြိတိန်မှလက်နက်များနှင့်ခဲယမ်းမီးကျောက်ဖြန့်ဖြူးသူများအားကမ်းလှမ်းခြင်းမရှိပါ။
နေထိုင်ခွင့် ဗြိတိန်အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ် ဗြိတိန်တွင်နည်းပညာဆိုင်ရာစောင့်ကြည့်ခြင်းသို့မဟုတ်ဗြိတိန်နိုင်ငံမှသို့မဟုတ်ဗြိတိန်သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များကိုစက်မှုစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုခြင်းအတွက်ကမ်းလှမ်းခြင်းမရှိပါ။
နေထိုင်ခွင့် ဗြိတိန်အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတိုင်ပင်ခံသည် ယူကေတွင်တရားမဝင်သောသို့မဟုတ်ရာဇ ၀ တ်မှုဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုများအတွက်ကမ်းလှမ်းခြင်းမရှိပါ။
နေထိုင်ခွင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအထောက်အပံ့ဖြင့် ယူကေအတွက် ယူကေရှိမျိုးရိုးဗီဇဆိုင်ရာပစ္စည်းများကိုကိုင်တွယ်သူတစ် ဦး ချင်းအတွက်မဟုတ်ပါ။
နေထိုင်ခွင့် ဗြိတိန်အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုန်ဆောင်မှုများက ယူကေရှိအန္တရာယ်ရှိသောသို့မဟုတ်အန္တရာယ်ရှိသောဇီဝဗေဒဆိုင်ရာသို့မဟုတ်နျူကလီးယားလက်နက်များရောင်းဝယ်သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်မဟုတ်ပါ။
နေထိုင်ခွင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်အားဖြင့် ကုန်သွယ်ရေး၊ ယူကေတွင်သိုလှောင်ခြင်းသို့မဟုတ်လူ့ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါများကိုသယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်းတို့အတွက်ယူကေအတွက်တစ် ဦး ချင်းအတွက်ဗြိတိန်အတွက်အထောက်အပံ့မရနိုင်ပါ။
နေထိုင်ခွင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် ယူကေအတွက် တရားမဝင်မွေးစားအေဂျင်စီများအတွက်မဟုတ်ပါဘူး။
နေထိုင်ခွင့် ပရိုဂရမ်ဝန်ဆောင်မှု ယူကေအတွက် ဗြိတိန်ရှိဘာသာရေးကိုးကွယ်မှုနှင့်၎င်းတို့၏ပရဟိတလုပ်ငန်းများအတွက်မဟုတ်ပါ။
နေထိုင်ခွင့် အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုန်ဆောင်မှုများက UK ယူကေရှိညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုသူများအားပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏နေထိုင်ခွင့် ဗြိတိန်ရှိရှေ့ရပျ ယူကေရှိမူးယစ်ဆေးဝါးဆိုင်ရာပစ္စည်းများကိုရောင်းဝယ်ဖောက်ကားခြင်းလုပ်ငန်းကိုမထောက်ပံ့ပါနှင့်။
“ အရေးကြီးတဲ့သတိပေးချက် : MM Solutions INC သည် UK နှင့် KYC အတွက်ဖောက်သည်များအတွက် AML စာရွက်စာတမ်းများကိုတိကျမှန်ကန်စေရန်ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများပြုလုပ်ထားသော်လည်းယူကေရှိအာဏာပိုင်များမှလျှောက်ထားမှုကိုအတည်ပြုရန်မည်သည့်တာ ၀ န်ကိုမှကျွန်ုပ်တို့လက်မခံပါ။ နေထိုင်ခွင့် ဗြိတိန်တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့်ဖြစ်သည်။
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ Residency မှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတွေ့အကြုံနှင့် UK ၏တရားဝင်လိုအပ်ချက်များကြောင့်ကျွနု်ပ်တို့အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းချက်များကိုပြုလုပ်သည်
UK အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၀ န်ဆောင်မှုများဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ Residency သည် UK အတွက်အကောင်းဆုံးအောင်မြင်နိုင်သောနှုန်းဖြင့်စျေးအသက်သာဆုံးစျေးနှုန်းကိုကမ်းလှမ်းသည်။
ဖောက်သည်များနှင့်၎င်းတို့၏မိသားစုများကိုဗြိတိန်နိုင်ငံသို့ထောက်ပံ့ပေးသော UK သည် dual Residency အတွက်နှစ်ပေါင်းများစွာအတွေ့အကြုံရယူခဲ့သည်။
ဗြိတိန်အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့ရွက်များနှင့်ဖောက်သည်များအားပံ့ပိုးမှုပေးသောဗြိတိန်အတွက်တရားဝင်ကိုယ်စားလှယ်များမှအတွေ့အကြုံရှိသော Residency ။
ဗြိတိန်အတွက်သင်၏ Residency မတိုင်မီနှင့်ခွင့်ပြုချက်အပြီးတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏အကြီးတန်းအဖွဲ့ ၀ င်သည်ဗြိတိန်နိုင်ငံသို့စီးပွားရေးသို့မဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးပံ့ပိုးမှုအတွက်ထိုနေရာတွင်ရှိနေလိမ့်မည်
Residency တွင်ဗြိတိန်အပါအ ၀ င်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံရှိပြီးအကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုများကိုကမ္ဘာအနှံ့ရှိသုံးစွဲသူများအားကူညီပေးနေသည်။
အကယ်၍ UK တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်သင်၏ Residency ပျက်ကွက်ပါကကျွန်ုပ်တို့ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသောနိုင်ငံပေါင်း ၃၆ ခုရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အစီအစဉ်ခနှင့်အဆင်သင့်ဖြစ်သည်။
ယူကေသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency အတွက်ကုန်ကျစရိတ်ကိုတွက်ချက်ပါ
Residency ၏ကုန်ကျစရိတ်ကို UK အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်တွက်လျှင်မိသားစု ၀ င်များနှင့်အသက်အရွယ်များကိုအသေးစိတ်ဖြည့်ပါ။ ယူကေအတွက်ဖောက်သည်အမြောက်အများကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာစွာဖြင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သော ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပေးနိုင်သည်။ ယူကေအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်နှင့် Residency အတွက်ကုန်ကျစရိတ်တို့ပါဝင်သည်။
ပုံစံ ဗီဇာ ယူကေအတွက်
ချက်ချင်းနှင့်အနာဂတ်လိုအပ်ချက်များအတွက်ကျွန်ုပ်တို့ယူကေတွင်ပေးသော ၀ န်ဆောင်မှုအနည်းငယ်ကိုကျွန်ုပ်တို့စာရင်းပြုစုထားသည်။
သင်သည်သင်၏မိသားစုနှင့်အတူဗြိတိန်နိုင်ငံသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်ပြောင်းရွှေ့ရန်စီစဉ်နေပါကကျွန်ုပ်တို့သည်ဗြိတိန်အတွက်သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အနေနှင့်၊ သင်တတ်နိုင်သောစျေးနှုန်းများဖြင့် UK ၌သင်လိုအပ်နိုင်သည့်အချိန်နှင့်အခြား ၀ န်ဆောင်မှုများစွာပေးအပ်ရန်ရှိပါသည်။
ယူကေအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာအကြံပေးခြင်းမှ Residency မှလွဲ၍ ကျွန်ုပ်တို့တွင်ဗြိတိန်နှင့်စီးပွားရေး၊ အိုင်တီနှင့် HR ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပေးသည်။ ဗြိတိန်နှင့်အခြားနိုင်ငံ ၁၀၆ ခုအတွက်တစ်နေရာတည်းတွင်တစ်နေရာတည်းဖြစ်စေရန်အခြားဗြိတိန်နိုင်ငံမှအကြံပေးများကပေးသောထီးတစ်ချောင်းအောက်တွင်သင်မတွေ့ပါ။
ဗြိတိန်နိုင်ငံရှိမိသားစုများ၊ တစ် ဦး ချင်းစီနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုသူတို့၏ရည်မှန်းချက်များနှင့်ရည်မှန်းချက်များအောင်မြင်ရန်ကူညီရန်နှစ်ပေါင်းများစွာအတွေ့အကြုံနှစ်ပေါင်းများစွာနှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးနိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံ၌ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ရှေ့နေများ၊ အတိုင်ပင်ခံများနှင့်ဗြိတိန်နှင့်နိုင်ငံတကာမှအကူအညီများဖြင့်ဗြိတိန်နိုင်ငံသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency ကို ကျော်လွန်၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်၏လမ်းကိုထောက်ခံသည်။
ငါတို့သည်သင်တို့ကိုကူညီနိုငျ ဗြိတိန်တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင် or Offshore နှင့်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံ (ယူကေတွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်ကုန်ကျစရိတ်သည်ကျွန်ုပ်တို့နှင့် ပို၍ ဈေးချိုသည်။ )
ဗြိတိန်နိုင်ငံသို့ပြောင်းရွှေ့အခြေချမည့်မည်သည့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူမဆိုလိုအပ်လိမ့်မည် ယူကေရှိကိုယ်ပိုင်ဘဏ်အကောင့် UK ရှိကုမ္ပဏီဘဏ်စာရင်းနှင့်လည်းကမ်းလွန်ဘဏ်စာရင်းများကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့ကူညီနိုင်သည်။
Incase သင်အဘို့, ဗြိတိန်နိုင်ငံအတွက်တိုင်ပင်လိုအပ်ပါတယ် ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေပေးချေမှုဖြေရှင်းချက် ယူကေရှိရိုးရာသို့မဟုတ် fintech ငွေပေးချေမှုတံခါးပေါက်သို့မဟုတ် crypto ဖြေရှင်းမှုများကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့ကိုအသိပေးပါ။
မှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် Residency ပြီးနောက် သင်အစီအစဉ်ဆွဲမယ်ဆိုရင်ဗြိတိန် ဗြိတိန်နိုင်ငံရှိလက်ရှိစီးပွားရေးကို ၀ ယ်ခြင်းအားဖြင့်လုပ်ငန်းတစ်ခုစတင်ရန် ဗြိတိန်မှာချက်ချင်းစတင်သည်။
ယူကေရှိ HR ဝန်ဆောင်မှုများ
ကျွန်တော်တို့၏ ယူကေရှိလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ကုမ္ပဏီ အမြန်စုဆောင်းမှုနှင့်အတူသင်ကူညီနိုင်သည်။ သင်လည်းလုပ်နိုင်တယ် ဗြိတိန်တွင်နေရာလွတ် post အခမဲ့ဖြစ်သည်။
ယူကေအတွက် virtual ဖုန်းနံပါတ်များ
ဗြိတိန်နိုင်ငံအတွက်စီးပွားရေးတယ်လီဖုန်းစနစ်များ ယူကေအတွက် virtual နံပါတ်များ 102 နိုင်ငံများနှင့် 291 မြို့ကြီးများ။
စာရင်းကိုင်, ဗြိတိန်အတွက်ကြောင့်လုံ့လဝီရိယနှင့် အများကြီးပို.
ယူကေရှိ Virtual ရုံးလိပ်စာ
ဗြိတိန်မှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် Residency ပြီးနောက်, အတွက် setup ကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်း UK.
ဗြိတိန်တွင် Web ဒီဇိုင်း
ယူကေတွင် Web တည်ဆောက်မှု
ဗြိတိန်ရှိ Blockchain ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု
ယူကေရှိ software များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု
ယူကေရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency အတွက်ရှေ့နေများ
UK အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြေရှင်းမှုဖြင့်တရား ၀ င်နေထိုင်မှုကိုပေးစွမ်းသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအတွက်အောင်မြင်မှုသည်အလွန်အရေးကြီးသည်။ UK အတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်ခေါင်းဆောင်များဖြစ်သည်။ ဗြိတိန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီသည် UK တွင်အကောင်းဆုံးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးကိုယ်စားလှယ်များရှိသည်။ ဗြိတိန်တစ် ဦး ချင်းစီနှင့်၎င်းတို့၏မိသားစုများအတွက်ရှင်းလင်းသောမဟာဗျူဟာမြောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြေရှင်းချက်။ ယူကေအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအဖွဲ့မှကျွန်ုပ်တို့၏ Residency သည်ဖောက်သည်၏အောင်မြင်မှုအတွက်ထုံးစံအတိုင်းဖြေရှင်းမှုများကိုပေးသည်။
သင်၏မိသားစုဝင်များ (ကလေးများ၊ ဇနီး၊ မိဘများ) သည်ဗြိတိန်နိုင်ငံ၌နေထိုင်ခွင့်ခွင့်ပြုချက်အရဗြိတိန်နိုင်ငံတွင်နေထိုင်ခွင့်ရှိသည်။
ဗြိတိန်နိုင်ငံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများက Residency မှသင်၏ကိုယ်စားဥပဒေရေးရာဆောင်ရွက်မှုများအားလုံးအတွက် UK အတွက်ရှေ့နေသည်လိုအပ်သည်။ သင်သည်ဗြိတိန်နိုင်ငံသို့ရောက်ရှိပါကသို့မဟုတ်ဗြိတိန်သို့လာရောက်လည်ပတ်ရန်စီစဉ်ထားပါကဤနေရာတွင်သင်၏ရှေ့နေအားကျွန်ုပ်တို့ရရှိနိုင်သည်။
ရှေ့နေပါဝါရရှိရန်ကျွန်ုပ်တို့အပိုမယူပါ။ ယူကေတွင်အဝေးမှကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းစတင်ရန်စီစဉ်ထားပါကသင်၏ဗြိတိန်ပိုင်နက်တွင်အသုံးပြုရန်သင်၏ရှေ့နေအားတရားဝင်တရားဝင်ဖြစ်သင့်သည်။ သင်၏နေထိုင်ရာနိုင်ငံပေါ် မူတည်၍ ၎င်းသည်ယူအက်စ်ကောင်စစ်ဝန်ရုံးကအက်ပလီကေးရှင်းသို့မဟုတ်တရားဝင်ဖြစ်စေသင့်သည်။
အမေးအဖြေများ - ယူကေတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်နေထိုင်ခြင်း
ဗြိတိန်သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခွင့်ကိုဗြိတိန်နိုင်ငံ၏စီးပွားရေးတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ စီးပွားရေး၊ အိမ်ခြံမြေ၊ အစိုးရငွေချေးစာချုပ်များစသည်ဖြင့်ဗြိတိန်နိုင်ငံ၏နေထိုင်မှုကိုရယူခြင်းဟုသတ်မှတ်နိုင်သည်။ ဗြိတိန်တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ရန်လျှောက်ထားခြင်း၊ ဗြိတိန်နိုင်ငံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာရှေ့နေများကအကောင်းဆုံးနေထိုင်ခွင့်၊ ဗြိတိန်နိုင်ငံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာရှေ့နေများနှင့်အကောင်းဆုံးနေထိုင်ခွင့်၊ ဗြိတိန်နိုင်ငံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတိုင်ပင်ခံများကအကောင်းဆုံးနေထိုင်ခွင့်၊ ဗြိတိန်ရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအေးဂျင့်များကအကောင်းဆုံးနေထိုင်ခွင့်၊ အကောင်းဆုံးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကုမ္ပဏီများမှတစ်ဆင့်ဗြိတိန်နိုင်ငံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၀ န်ဆောင်မှုများဖြင့်နေထိုင်ခြင်း၊ ယူကေမှာ။
ယူကေအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၀ န်ဆောင်မှုများဖြင့်နေထိုင်ခွင့် ယူကေရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုယ်စားလှယ်များနေထိုင်ခြင်း ယူကေရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများကနေထိုင်ခွင့် ယူကေရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများမှနေထိုင်ခွင့် ယူကေအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတိုင်ပင်ခံများကနေထိုင်မှု
ဗြိတိန်နိုင်ငံ၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုဗြိတိန်နိုင်ငံရှိစီးပွားရေး၊ အိမ်ခြံမြေလုပ်ငန်း၊ အစိုးရငွေချေးစာချုပ်များစသည့်နည်းလမ်းများမှတစ်ဆင့်ဗြိတိန်နိုင်ငံ၏စီးပွားရေးကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်ဗြိတိန်နိုင်ငံသားအဖြစ်ခံယူခြင်းဟုသတ်မှတ်နိုင်သည်။ ဗြိတိန်တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု၊ ဗြိတိန်နိုင်ငံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုဗြိတိန်နိုင်ငံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများကအကောင်းဆုံးနိုင်ငံသားအဖြစ်လျှောက်ထားခြင်း၊ ဗြိတိန်နိုင်ငံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများမှနိုင်ငံသားအကောင်းဆုံးနှင့်ဗြိတိန်နိုင်ငံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတိုင်ပင်ခံများမှနိုင်ငံသားအဖြစ်လျှောက်ထားခြင်း။ ယူကေရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအေးဂျင့်များ၏အကောင်းဆုံးနိုင်ငံသားဖြစ်မှုနှင့် UK ရှိလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကုမ္ပဏီများ။
ယူကေအတွက်စျေးနှုန်းချိုသာသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး ၀ န်ဆောင်မှု ယူကေရှိစျေးသက်သာသောလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေများ ယူကေရှိစျေးနှုန်းချိုသာသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူလူ ၀ င်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေများ ယူကေရှိစျေးနှုန်းချိုသာသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူလူ ၀ င်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေများ ယူကေအတွက်စျေးနှုန်းချိုသာသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူလူ ၀ င်မှုကြီးကြပ်ရေးအကြံပေးများ ဗြိတိန်အတွက်စျေးသက်သာလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေကုမ္ပဏီများ
ဗြိတိန်နိုင်ငံ၏ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိုဗြိတိန်နိုင်ငံ၏စီးပွားရေးတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ အိမ်ခြံမြေ၊ စီးပွားရေး၊ အစိုးရငွေချေးစာချုပ်များစသည်ဖြင့်တရားဝင်နိုင်ငံသားအဖြစ်ရယူခြင်းစသည်ဖြင့်သတ်မှတ်နိုင်သည်။ ဗြိတိန်သို့ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်လျှောက်ထားခြင်း၊ ယူကေအတွက်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ် ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ ဗြိတိန်နိုင်ငံ၏အကောင်းဆုံးဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရှေ့နေများ၊ ဗြိတိန်နိုင်ငံ၏ဒုတိယမြောက်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရှေ့နေများနှင့်ဗြိတိန်နိုင်ငံ၏ဒုတိယမြောက်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်အတိုင်ပင်ခံများ၊ ဗြိတိန်နိုင်ငံ၏အကောင်းဆုံးဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် UK ရှိလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကုမ္ပဏီများမှတစ်ဆင့်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း။
ယူကေအတွက်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ် ၀ န်ဆောင်မှုများ ဗြိတိန်နိုင်ငံ၏ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိုယ်စားလှယ်များ ဗြိတိန်နိုင်ငံ၏ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရှေ့နေများ ယူကေရှိနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရှေ့နေများ ဗြိတိန်နိုင်ငံ၏နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်
ဗြိတိန်နိုင်ငံရှိရွှေဗီဇာကိုအစိုးရ၏ငွေချေးစာချုပ်၊ စီးပွားရေး၊ အိမ်ခြံမြေစသည်တို့ဖြင့်ဗြိတိန်နိုင်ငံ၏စီးပွားရေးတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်ဗြိတိန်နိုင်ငံ၏နေထိုင်ခွင့်လက်မှတ်ရယူခြင်းဟုသတ်မှတ်နိုင်သည်။ ဗြိတိန်သို့ရွှေဗီဇာလျှောက်ထားခြင်း၊ ယူကေအတွက်အကောင်းဆုံးရွှေဗီဇာရှေ့နေများ၊ ဗြိတိန်ရှိအကောင်းဆုံးရွှေဗီဇာအကြံပေးများနှင့်ဗြိတိန်အတွက်အကောင်းဆုံးရွှေဗီဇာအတိုင်ပင်ခံများ၊ ဗြိတိန်ရှိအကောင်းဆုံးရွှေဗီဇာကိုယ်စားလှယ်များနှင့်ဗြိတိန်ရှိလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကုမ္ပဏီများမှတဆင့်ဗြိတိန်အတွက်ရွှေဗီဇာဝန်ဆောင်မှုများ
ယူကေအတွက်ရွှေဗီဇာဝန်ဆောင်မှုများ | ယူကေရှိရွှေဗီဇာကိုယ်စားလှယ်များ ယူကေရှိရွှေဗီဇာရှေ့နေများ ယူကေရှိရွှေဗီဇာရှေ့နေများ ယူကေအတွက်ရွှေဗီဇာအတိုင်ပင်ခံ
ယူကေတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့် Residency အတွက်အနည်းဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကဘာလဲ။
ယူကေတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့် Residency အတွက်အနည်းဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသည် GBP ၅၀,၀၀၀ ဖြစ်သည်။
Residency အတွက် UK အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်တရားဝင်အထောက်အပံ့ပေးပါသလား။
ဟုတ်ပါတယ်၊ ဗြိတိန်ရှိကျွန်ုပ်တို့၏ရှေ့နေနှင့်ဗြိတိန်မှအေးဂျင့်များသည် Residency ကို UK တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်ပံ့ပိုးသည်။
ဗြိတိန်သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ရန်ကုန်ကျစရိတ်နှင့်ယူကေအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေလိုအပ်ချက်များကြောင့် Residency သည်အမြတ်အစွန်းမြင့်မားသောလူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ချင်းအတွက်ဖြစ်သည်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် Residency မှ UK သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတွက်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးကြေးကိုသာပေးရသည်၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများအတွက် Residency အတွက်အခြားအထောက်အပံ့များစွာကိုလည်းပေးသည်။
မည်သည့်နိုင်ငံသားသည်ဗြိတိန်သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသို့မဟုတ်ဗြိတိန်သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူဗီဇာဖြင့် Residency လျှောက်ထားနိုင်သနည်း။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၀ န်ဆောင်မှုဖြင့်နေထိုင်ခွင့်သည်မည်သည့်နိုင်ငံသားမဆိုအသုံးပြုနိုင်သည်။ ဥပမာအနည်းငယ်မှာအာရှမှယူကေသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမှ Residency၊ အာဖရိကမှဗြိတိန်သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်း၊ ဥရောပမှဗြိတိန်သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency၊ တောင်အမေရိကမှဗြိတိန်သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်း၊ မလေးရှားမှဗြိတိန်သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်မှု၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှမှဗြိတိန်သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်း၊ အင်ဒိုနီးရှားမှဗြိတိန်မှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency၊ သီရိလင်္ကာမှဗြိတိန်သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency၊ နီပေါမှဗြိတိန်သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency၊ ယူအေအီးမှဗြိတိန်မှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့်ဖြစ်သည်။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလမ်းညွှန်မှုအားဖြင့် Professional ကနေထိုင်မှု ယူကေအတွက်
ယူကေအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency တွင်အရေးကြီးသောဝေါဟာရများ
link ကိုမှ ယူကေလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဌာန ယူကေတွင်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးကိုအရှိန်မြှင့်ရန်အတွက်မူဝါဒချမှတ်ရန်တာ ၀ န်ရှိသည်